Amandla Avuselelekayo - Ama-Green Renewables | Ukuvuselelwa Okuhlaza Okuhlaza (Ikhasi 3)
UMariano Rajoy umemezele ukuthi useqalile izinqubo zokwethula indali entsha yamandla avuselelekayo ka-3.000 megawatts (MW)
Uzihambisa kanjani izindwani zemitha ezingama-52 zomoya ophephela
Sibona i-odyssey yokuhambisa ama-turbine blades, kungaba olwandle noma umhlaba (amaloli nesitimela). Amapulazi omoya amakhulu kunawo wonke emhlabeni
ISwitzerland ivotela iphrojekthi yokuvala izikhungo zayo zamandla enuzi
AbaseSwitzerland bavunyelwe iningi kwinhlolovo yokuvala ngokuqhubekayo izitshalo zabo zamandla enuzi futhi bathuthukise amandla avuselelekayo (umoya, amandla elanga ...)
Amandla omoya amandla awo umthombo wawo ungumoya. Indlela yokusebenzisa la mandla nge-windmill noma imishini yomoya.
IForestalia ishanela endalini evuselelekayo
Amandla omoya ashanele indali, bonke abawinile banikeze isaphulelo esiphezulu. I-Enel (500MW) iGesi Yemvelo (650MW), i-Gamesa (206MW) neForestalia (1200MW)
Ipulazi lomoya elikhulu kunawo wonke lise-United States. Amapulazi omoya amakhulu kunawo wonke emhlabeni. Amapaki omhlaba, amapaki aselwandle. Ikusasa lomoya
IMuras, enezakhamizi ezingama-668, inama-turbines omoya angama-381, ixhasa izikweletu zikagesi zomakhelwane ngentela eyikhokhisa u-Acciona no-Iberdrola.
Ukuqoshwa okusha kwamapaneli elanga, ama-24,13% avela kuTrina Solar!
ITrina Solar isetha irekhodi elisha elinendawo ephelele yokusebenza okuyi-24,13% yengqamuzana elisebenzisa i-monocrystalline silicon solar.
I-TS isichithile isicelo se-UNEF sokumisa ngokushesha nangokuvikela imithetho nezinqubo ezisungulwe nguHulumeni.
I-Aerothermal isebenzisa amandla aqukethwe emoyeni, lokhu kuvuselelwa njalo, kuguqula umoya ube ngumthombo wamandla ongapheli.
I-WaveStar uhlelo lapho amandla we-wave, amandla we-wave, angakhiqizwa ngaphandle kokuphazamiseka, anikeze ukumelana nesimo sezulu esibi.
Ucwaningo lushicilelwe yi-European Environment Agency, lapho kungabonakala inqubekela phambili yamandla avuselelekayo ngaphakathi kweNyunyana.
Amazwe okwamanje akhiqiza amandla omoya amaningi
Amazwe anomkhiqizo ophezulu wamandla omoya emhlabeni, obani abadlali abakhulu abazibophezele kulolu hlobo lwamandla?
Umhlaba wonke unama-gigawatt ama-300 wamandla elanga we-photovoltaic
Ukuze kubalwe ukuthi yini ekhiqizwa ngamandla avuselelekayo, i-International Energy Agency yenze ibhalansi yonyaka we-2016.
I-Andalusia enkathini entsha yamandla avuselelekayo
I-Andalusia neminye imiphakathi ibhekene nenselelo yokwenza inzuzo ekufikeni kwezimali ezintsha kumandla avuselelekayo.
U-Elon Musk Umemezela Izinhlelo Zokuqalisa i-Tesla Pickup
UTesla ukulungele "ukukuyisa ngokungathi sína ezingeni elilandelayo" ngeloli likagesi ezinyangeni ezimbalwa nje, nangeloli elisebenza ngogesi eminyakeni engaphansi kwengu-2
ISpain ilahlekelwa ngumlamuli wayo wokuqala wamazwe omhlaba ngenxa yokusikwa kokuvuselelwa
ISpain ilahlekelwe yimibango yokuqala yamazwe omhlaba ngaphambi kwe-ICSID, ngenxa yokusikwa okusetshenzisiwe kusukela ngo-2010 ukusiza amandla avuselelekayo
IPortugal iyakwazi ukuzitholela okuvuselelekayo izinsuku ezine
IPortugal ikwazile ukugcina ukutholakala kukagesi kusuka ezintweni ezivuselelekayo izinsuku ezine zilandelana.
Inkampani yaseSpain (TSK) ngemuva kwepaki enkulu yelanga e-Asia
IDubai inofakelo olusha olusha ehlane. Ipaki ibizwa nge-Mohammed Bin Rashid, eyakhiwe yi-TSK futhi inkulu kunazo zonke eMiddle East.
Ukuqashwa ngamandla avuselelekayo
Imboni yamandla avuselelekayo inyuke kakhulu kule minyaka edlule, ngakho-ke kunesidingo esikhulu somsebenzi kulo mkhakha.
USUKU LOMHLABA 2018 luzoba ngo-Ephreli 22
I-Earth Day 2018 izogujwa ngo-Ephreli 22 njengayo yonke iminyaka. Ngo-1970 kwaba unyaka wokuqala lo mcimbi wabanjwa. Ukuvuselelwa kwamandla avuselelekayo
Amandla elanga ... nemvula!. Iseli elisha elanga ne-graphene
Ngokuthuthukiswa kweseli elisha elanga nge-graphene kuzokwenzeka ukuthola amandla elanga ngamaconsi emvula. Intuthuko yamandla elanga.
Ukugcinwa komoya ominyene ukukhiqiza ugesi
Isitoreji somoya esicindezelwe ukusisebenzisa njengebhethri yamandla avuselelekayo lapho la mandla engatholakali ngephrojekthi ye-RICAS 2020.
Ukumangala kwamandla elanga! Kushibhile
Izimakethe zamandla omhlaba ziyaguquka, kuze kufike ezingeni lokuthi amandla elanga abe yindlela eshibhe yokuthola ugesi
U-Iberdrola uzofaka ugesi kwa-Apple eminyakeni engamashumi amabili ezayo ngokusebenzisa ipaki e-Oregon, lapho izotshala khona ama-dollar ayizigidi ezingama-300.
Ukuvela, ukusebenza nekusasa lamapulazi omoya. Ukwakhiwa kwemishini yomoya. Ukubaluleka kwamandla omoya.
Uhulumeni ushicilele ku-BOE ukuthi ugunyaza i-Renovables de Sevilla SL ukufakwa kwelanga kwe-110MW Guillena photovoltaic. Ikusasa lamandla elanga.
I-CO80 engaphansi ngama-2% ngama-biofuel wamanzi angcolile
Iphrojekthi ye-LIFE + Methamorpohis iqukethe ukusebenzisa amanzi angcolile njengomunye umthombo wamandla nokuwusebenzisa njenge-biofuel.
Ngo-2017, kuzofakwa ngaphezu kuka-60.000 MW wamandla omoya emhlabeni
Ngo-2016, ngaphezu kwama-54.000 MW wamandla omoya afakwa emazweni angaphezu kwama-90. Umthamo onqwabelene emhlabeni wonke ukhule ngo-12,6% ngonyaka odlule, wafinyelela kuma-486.000 MW
Ukuphathwa kwamahlathi namandla e-biomass njengomthombo osimeme
Ukuphathwa kwamahlathi kanye ne-biomass esimeme kufanele kugcwaliswe kanjani ukugwema ukuqothulwa kwamahlathi emhlabeni jikelele? Thola lapha
I-UK iyeka ukusebenzisa amalahle ukukhiqiza ugesi eminyakeni eyi-135 kamuva
Kwaba yisizwe sokuqala ukusebenzisa amalahle ukukhiqiza ugesi, eminyakeni eyi-135 kamuva, kungokokuqala kwe ...
Izinyathelo zokufeza izinjongo zamandla ngo-2030
Umbhalo wezinhloso zamandla ku-2030 ushicilelwe yi-IEA, iBhange Lomhlaba noma i-IRENA phakathi kwezinye izinhlangano zomhlaba wonke.
Ngabe sizokwazi ukumisa iziphepho futhi sigcine amandla azo?
Eziphepho zasezindaweni ezishisayo neziphepho, umoya uphatha amandla amakhulu kakhulu angasetshenziselwa ukukhiqiza amandla omoya.
Kuphela yi-3% yamandla e-Balearic Islands evuselelekayo
I-Greens / European Free Alliance (Imifino / i-Ale) ne-MÉS ngeMallorca bonisa ukukhubazeka okujulile ngoba eBalearic Islands «kuphela ku-3…
ISilicon Valley, yamandla omoya aphesheya kwezilwandle amazwe amathathu aseYurophu
ISilicon Valley yamandla omoya aphesheya kwezilwandle kuzoba iphrojekthi ye-Power Link Islands etholakala e-Dogger Bank eyenziwe yiJalimane, iDenmark neNetherlands.
Ukwenza amandla ngenkathi uhamba kungenzeka (Pavegen smart tile)
Ukuhamba ngejubane ezikhumulweni zezindiza, enxanxatheleni yezitolo nasezinkundleni zebhola kungakhipha amandla futhi kwehlise umthethosivivinywa ngenxa yamathayili we-Pavegen smart
Amabhange ethula iGreen Loan
Isikhungo sezezimali sisanda kwethula iGreen Loan yaso, umkhiqizo "owenziwe ngenhloso yokwenza lula ukufinyelela kumandla avuselelekayo"
Izakhiwo ezinamandla acishe zisebenzise ugesi
ESpain kunendlela ende okufanele ihanjwe ukuhambisana ne-European Directive 2010/31 ukuze izakhiwo zakhiwe ngamandla amaningi kusuka ku-2020
Imakethe yomhlaba yamandla amancane omoya izokhula ngama-20% eminyakeni emihlanu
Umbiko omusha we-Research and Markets ubikezela ukuthi imakethe yomhlaba yamandla amancane omoya izokhula ngaphezu kwe-20% eminyakeni ezayo.
Kuyiphutha elibi uMnyango ukubhekana nobuchwepheshe obungavuseleleka endalini
I-Association of Renewable Energy Companies-APPA isola imvula, ukungavumelani nokungahleleki kwendali evuselelekayo.
ISolar City yaseMelika yokuqala, iBabcock Ranch
Idolobha lokuqala lelanga liseMelika futhi lizobizwa ngeBabcock Ranch, idolobha elizoba nesitshalo selanga, izingadi zomphakathi, njll.
I-Asia ilungele ukudlula iYurophu ngogesi we-biomass
Ngo-2015 umehluko phakathi kwe-ASIA ne-EUROPE wawungaphezu kuka-6.000 MW kanti ngonyaka olandelayo wawungafinyeleli ku-1.500. Ukuziphendukela kwemvelo nekusasa le-biomass
Uma iSpain ingashintshi ukulawulwa kwamandla avuselelekayo, ngeke ihambisane neSivumelwano SaseParis
ISpain ngokungaguquli umthethonqubo wokuvuselelwa ngeke ikwazi ukuhlangabezana nenhloso ebekwe Isivumelwano SaseParis sonyaka ka-2050.
Ingabe kuwufanele ukuthenga amasekeli elanga angamasekeni?
Ngaphambi kokuthenga amasektha elanga angamasekeni, kufanele sihlaziye izici ezahlukahlukene ezizokwenza ukutshalwa kwezimali kwethu kube nenzuzo.
Kusukela cishe ukungabi nokufakwa kwe-photovoltaic ekuqaleni kwaleli shumi leminyaka ukubikezela ukuthi kubikezela okungaphezulu kwe-40 GW efakwe ekugcineni kwayo.
I-Hydrotor, indlela entsha yokubheka amandla we-hydraulic
I-Hydrotor, i-turbine entsha entsha ekwazi ukukhiqiza amandla wokubacindezela emibhedeni yemifula noma izijobelelo zawo kahle. Kwenziwe ngokuphelele eSpain.
Eminyakeni eyi-10, okuvuselelekayo kuzoba umthombo oshibhile wamandla
Ngo-2016, 9% wamandla avuselelekayo afakiwe, kanti ama-23% amancane atshalwe imali kunangonyaka owedlule ngenxa yemisebenzi emisha emkhakheni
Izinto ezi-6 okufanele wazi ngamandla amancane omoya
Amandla amancane omoya yisisombululo sokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla kagesi. Ingazikhiqizela ugesi futhi yongele imali oyikhokhayo kagesi
IGreenpeace idala izinganekwane zamandla avuselelekayo
IGreenpeace ithi umhlaba onamandla ahlanzekile wabo bonke kungenzeka futhi usebenza, yingakho uzinikele ekuqedeni ezinye izinganekwane ezibaluleke kakhulu
Ukubalwa kwamalambu okonga amandla ama-light light
Kumandla okonga amandla siwahlukanisa ngokokukhanya kwawo, ngeyunithi ebizwa ngokuthi "amalambu" ekhombisa kahle inani lokukhanya okukhishiwe.
Ukuzibophezela okukhulu kweBarcelona 'ngamandla elanga'
IBarcelona isebenza ukukhuthaza amandla elanga, ngenhloso yokuphinda kabili ukukhiqizwa kukagesi kamandla kusuka ku-photovoltaic energy
UHulumeni wehlisa «amaphrimiyamu» endalini elandelayo yokuvuselelwa
UMnyango unciphise inani eliphezulu losizo kulabo abawine endalini elandelayo. I-11% yomoya, ne-22% ye-photovoltaic
Kanjalo namathayili elanga azomboza izindlu esikhathini esizayo esingekude kakhulu
Ngokungafani namapaneli we-photovoltaic abekwa ophahleni, amathayili elanga ayabukeka futhi acishe afane nepuleti.
Iziqhingi zaseCanary zishintsha imodeli yazo yamandla: Kusuka kuwoyela kuya kokuvuselelekayo
Izinkinga ezintathu zeCanary Islands energy model (kanye nezixazululo zazo). Ukuxhumana phakathi kweziqhingi. Ukusetshenziswa okukhulu kwamandla avuselelekayo. Uphethiloli
UTesla ufuna ukwakha idolobha elisimeme kakhulu emhlabeni
UTesla uzokwakha idolobha elinikezwe i-100% ngamandla avuselelekayo, ngezokuthutha zikagesi kuphela kanye nemigwaqo yabahamba ngezinyawo ngokuphelele
I-UNEF icela i-TS ukuthi imise indali yezinto ezivuselelekayo
I-UNEF icele iNkantolo Ephakeme ukuthi isebenzise izindlela zokuvikela ukumiswa kwendali elandelayo yokuvuselelwa. Njengoba ithanda i-Wind Energy
Inethiwekhi yokushisa ye-biomass yezakhamizi ezingama-6000 izofakwa eGuadalajara
IGuadalajara izoba nenethiwekhi yokushisa ye-biomass ezohlinzeka ngamandla ezishisayo kubahlali abangama-6.000 XNUMX. Ukuziphendukela kwemvelo nekusasa le-biomass. Ukonga amandla.
Eminyakeni eyishumi ukusuka eBarcelona kuya eMadrid ngaphandle kukaphethiloli
UWright Electric uzibekele umgomo wokwakha indiza elanga kungakapheli iminyaka eyishumi. Ukuziphendukela kwemvelo nekusasa lezimoto zikagesi. Indiza yelanga
Omasipala abancane baseCatalan bacela i-canon yomoya
I-AMEC ifuna kusungulwe uhlu lwezincwadi ezihlongozwayo emapulazini omoya, ukulwa nokuncipha kwabantu kanye nokuguga kwamadolobha
UHulumeni ubiza indali yamamegawathi angama-3.000 avuselelekayo
Uhulumeni ugunyaze i-RD ebiza indali efinyelela kuma-3000 MW obuchwepheshe obuvuselelekayo. I-Evolution nekusasa lokuvuselelwa eSpain
Umkhandlu wedolobha i-BCN udala umakethi womphakathi omkhulu kunabo bonke eSpain
Okokuqala kwakuyiCádiz futhi manje sekuyiBarcelona.
Amandla elanga asemfashinini
Izinyathelo ezintsha emandleni we-photovoltaic, izakhiwo ezintsha, ikusasa lamandla avuselelekayo, izitayela ezintsha, umbukiso we-Intersolar eJalimane.
Inzuzo enkulu yamandla elanga ngaphezulu kokunye okuvuselelwa njengamandla omoya namandla we-hydraulic.
IGreenpeace ibhikisha ngokuvinjelwa kukagesi ezintweni ezivuselelekayo
Izishoshovu zeGreenpeace zithunyelwe ukusola inqubomgomo yalezi zinkampani evimba amandla avuselelekayo kanye nokungcola
Intuthuko ezoguqula amandla avuselelekayo (AmaSolar Solar Panels neSolar Tinta)
Intuthuko yezobuchwepheshe yenze ukuthi ilanga nomoya kube lula ukusizakala. Imibono yokwenza ngcono ukusebenza kwakho kahle. Ikusasa elizayo
UDonald Trump ukhipha umyalo ophikisana nokuvuselelwa kabusha
Imiphi imiphumela lo myalelo ozoba nayo ekusetshenzisweni okuvuselelekayo kanye nokuncika komnotho wase-US kumafutha ezimbiwa phansi?
IGerman ihlela ukuletha amakhaya ayisigidi esingu-3,8 ukuqasha amandla we-photovoltaic
Ukuvela kwamandla we-photovoltaic namandla kagesi, amamodeli amasha wezohwebo, ukuzisebenzisela wena, ama-accumulators asekhaya nawezimboni, amabhethri e-lithium
Amandla ase-European offshore energy alindele iminyaka yokurekhoda
Ikusasa lamandla avuselelekayo. Ukuvela kwamandla omoya waselwandle nekusasa lalo eliseduze. Ipulazi lomoya elikhulu kunawo wonke emhlabeni
ISpain ivula futhi emkhakheni ovuselelekayo
Umlando wokuvuselelwa kabusha, ukuqhuma komkhakha, ukuwa komkhakha. Amathuba amasha. Ikusasa lamandla avuselelekayo (umoya, ilanga, i-hydro ...)
Ukufakwa okukhulu kwamandla elanga eCórdoba kusesitolo
Isitolo esikhulu sakwaDeza sifake ama-photovoltaics angama-32,4 kW okuzisebenzisela wona, okuzokuvumela ukuthi wonge u-15% wesikweletu sakho sikagesi.
Kutholwa uketshezi ukugcina amandla elanga
Ithimba labaphenyi abavela kwaChalmers likhombisile ukuthi kungenzeka ukugcina amandla elanga ngqo kuketshezi lwamakhemikhali
Idale iseli elanga kakhulu
UYoshikawa wethule iphaneli yokuqala ye-photovoltaic edlula ukusebenza kahle kuka-26% ukuguqula ukukhanya kube ngamandla elanga.
IFinland izovimbela ukusetshenziswa kwamalahle ukukhiqiza ugesi ngaphambi kuka-2030
UHulumeni waseFinland wethule uhlelo lweqhinga lomkhakha wamandla wokuvimbela ukusetshenziswa kwamalahle ekukhiqizeni ugesi ngonyaka ka-2030
ICastilla y León izoxhasa ngemali ngamaphrojekthi we-3 M € wokusebenzisa amandla emiphakathini engomakhelwane
Imixhaso eCastilla y León. Ukusebenza kahle kwamandla. Ukuqaliswa kwamandla avuselelekayo emadolobheni. Inethiwekhi entsha yokupholisa umoya e-Olot
Bacebisa ukuthi kudalwe amachweba okwenziwa ukukhiqiza amandla.
Inkampani yase-UK iphakamisa iphrojekthi yokwakha amachibi okufakelwa futhi ithole amandla avuselelekayo ngamandla wamaza.
Ikusasa lamandla omoya
Ukuvela kwamandla womoya, ama-turbine amasha omoya. Nika amandla amapaki amadala. Amapaki asogwini. Ama-prototypes amasha anamandla amakhulu
Ukutshala imali kumandla avuselelekayo kuzokhuphula iGDP yomhlaba
Amandla avuselelekayo athola amandla amaningi ngokwengeziwe nokuncintisana okuningi. Ukutshala imali ezintweni ezivuselelekayo kuzosisiza ukukhulisa iGDP yomhlaba.
Amandla omoya aphesheya kwezilwandle azobaluleka ekuthuthukiseni okuvuselelekayo
Amandla omoya aphesheya kwezilwandle angena ezimakethe futhi athola ukuncintisana.Izoba njani indawo yamandla omoya kula mashumi eminyaka alandelayo?
Ifektri entsha kaTesla eHawaii: amabhethri angama-272 kokukodwa
I-Tesla iyaqhubeka nohlelo lwayo lokunweba ukuhlinzeka ngamandla ahlanzekile eziqhingini ezikude ePacific. HyperLoop, SpaceX, Solarcity, Powerwall, Powerpack
I-EU ifuna izincazelo ezivela eSpain ngezingqinamba zokuzisebenzisela ugesi
Amacala aseBrussels abhekene nezithiyo ezibekwe yiSpain ekusebenziseni ugesi, i-veto yezakhamizi kanye ne-PP ekusebenziseni ngokwakho. Ukuvuselelwa kwamandla avuselelekayo
ISpain, isibonelo esibi emkhakheni ovuselelekayo
Ukuguqulwa okujwayelekile kohlelo lwamandla emhlabeni jikelele, ukuvela komkhakha ovuselelekayo, imiphumela yokusetshenziswa kwezinto zokwenziwa kwezinto ezimbiwa phansi.
Ukuvuselela okuvuselelekayo kwehlisa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa
Ukuguquka kwesimo sezulu nemiphumela yako. Ukwanda kwamazinga okushisa eSpain. Kunciphisa ukuphuma kwamagesi abamba ukushisa ngenxa yokusetshenziswa kancane kwamalahle
Ama-28% kagesi womhlaba ngo-2021 azovuseleleka
Ukukhathazeka ngemvelo kukhule ezikhathini zamuva phakathi kwabantu bomhlaba. Amandla Avuselelekayo Evolution. Imishini yomoya emisha
IJalimane iguqula imayini yamalahle ibe yisiteshi esikhulu samandla kagesi ophehla ugesi
Kusukela ngo-2018, iJalimane ngeke isasebenza noma yiziphi izimayini zamalahle ze-anthracite. Ukuvela kwamandla kagesi kagesi. Amandla avuselelekayo eCosta Rica.
I-veto ye-PP neka-C umthetho wokuzisebenzisela ugesi
IBhodi leCongress ligunyaze, ngosizo lwe-PP kanye neZakhamizi, ukuvotela uhulumeni mayelana nokuzisebenzisela ugesi. Ukuvela kwamandla avuselelekayo
Ngeshwa iSpain imile ekusetshenzisweni kwamandla avuselelekayo
ISpain imile ekusetshenzisweni kwezinto ezivuselelekayo. Ukuguquka kwamandla avuselelekayo. Imiphumela yokusetshenziswa kwezinto ezimbiwa phansi. ukuthengwa kwamalungelo e-CO2
I-turbine yokuqala yasogwini lolwandle eSpain izoba emanzini aseCanary
Iziqhingi zaseCanary zizoba ne-turbine yokuqala yomoya eSpain: Evolution Wind Energy. Amandla avuselelekayo eCanary Islands. Ukuqaliswa kwephrojekthi yePlocan
Ukusungulwa okuphezulu kwelanga okungu-5 okumake kakhulu
Kunezinto eziningi ezisungulwe ngelanga, ezinye zilula kanti ezinye zinesifiso esikhulu esikhombise ukuthi amandla avuselelekayo angathembeka
Kuzokwenzekani eYurophu ngamandla avuselelekayo nokuzisebenzisa?
I-E.ON inxusa abasebenzisi bayo ukuthi bazidle futhi bazosebenzisa uhlelo olubizwa ngeSolarCoud oluvumela ukukhiqiza nokonga ugesi. Ikusasa lokuzisebenzisela wena
Ukuvuselelwa kwaseSpain kungena eLatin America
Izinkampani zaseSpain zithola ikusasa lazo eLatin America ngamandla avuselelekayo njengenye yezinto ezaziwa kakhulu emhlabeni jikelele.
Inselelo yamandla avuselelekayo eCanary Islands
UHulumeni uthemba ukuthi ngalesi silinganiso esisha, esikhathini esifushane singasuka ku-9% esivuselelekayo siye ku-21%.
Sibala ukuthi mangaki amaphaneli elanga owadingayo, abalingiswa abaphambili bamandla elanga, kanye nokuvela kwawo eminyakeni ezayo
Umsunguli uTesla uthi uyakwazi ukuxazulula izinkinga zamandla aseNingizimu Australia. I-Evolution Tesla, SpaceX, Hyperloop neSolarCity
ITunisia izotshala imali eyizigidigidi zamaRandi ngokuvuselelwa
ITunisia ihlose ukutshala imali engangezigidigidi zamaRandi ukuze ikwazi ukukhulisa amandla kagesi ngokuvuselelwa kukagesi wezwe.
I-Operation Air ukuthola ukushiswa kwezinkuni eziphathwayo
Nge-Operation Air, ukushiswa kwezinkuni ezilungisiwe kuzobhekwa njengoba kuyingozi ngenxa yezinto ezinobuthi ezikhishwe
Izidingo zomuntu ngamandla avuselelekayo: Watly
Le phrojekthi isekelwa uxhaso oluvela kuphrojekthi ye-Horizon 2020 futhi isizokwethula umshini wayo wokuqala ophelele we-Watly.
INetherlands iyizwe lokuqala emhlabeni elinama-100% ezitimela zomoya
INetherlands yandisa uguquko lwayo lukagesi 'ngezitimela zomoya'. Ushintsho bekungalindelekile ukuthi luzoza kuze kube unyaka ka-2018. Usebenzisa amandla omoya
Okubalulekile phakathi kwamandla olwandle namandla we-wave kanye nezinye izinzuzo nezinkinga
Ama-turbine omoya asebenza kangcono angama-35% ngenxa yamaphiko ezinambuzane
Ukuziphendukela kwemvelo nekusasa lamandla omoya, ukudala imishini yomoya esebenza kahle kakhulu ngenxa yocwaningo lwamaphiko ezinambuzane. Amavidiyo we-V164 turbine
Ukusetshenziswa komhlaba oseceleni kwemikhiqizo ye-biomass
Kuphakanyiswa ukusetshenziswa kwezindawo eziseceleni ukuze kutshalwe ezinye izitshalo ezizonikezelwa kuphela ekukhiqizeni i-biomass esimeme.
I-Olot (Girona) idala inethiwekhi yokuqala yokupholisa umoya ngokuya ngamandla amathathu avuselelekayo
U-Olot usanda kwethula inethiwekhi yokuqala evuselelekayo yokupholisa umoya engenakulinganiswa. Ukusetshenziswa kwe-geothermal, photovoltaic kanye ne-biomass
Kuyini, ikhiqizwa kanjani nokuthi i-photovoltaic energy isebenzisa ini
Wenziwa kanjani amandla we-photovoltaic solar, siwasebenzisa kumiphi imikhakha? Izoguquka kanjani futhi lizoba yini ikusasa layo? Izinkinga zini ezixazululayo?
Imigwaqo emikhulu enophahla lwelanga
Umhlaba uzama ukusebenzisa amandla ahlanzekile kakhulu: ukumboza imigwaqo, imigwaqo emikhulu kanye nojantshi ngophahla lwe-photovoltaic yelanga manje sekuyindlela
Isiko lemvelo laseSpain liphansi
Ukongiwa kwemvelo kusendaweni yesithathu ohlwini lokukhathazeka kwabaseSpain, ngemuva kokungasebenzi kanye nempesheni.
I-turbine yomoya enkulu kunazo zonke emhlabeni
IVestas yethule ukuvuselelwa komoya ophephela omkhulu kunayo yonke emhlabeni. I-V164, i-windmill engu-220m enamathani angama-38 nama-80m blade amade
Izindlu zelanga, izindlu zesikhathi esizayo
Izindlu ezisebenza ngelanga zingaba ngezinhlobo ezahlukahlukene ezinenzuzo njengamapaneli elanga, ukusetshenziswa kwamanzi kancane. Izindlu zesikhathi esizayo zilapha.
Ipulazi lomoya elingasolwandle elikhulu kunawo wonke emhlabeni
Ipulazi lomoya elingasolwandle elikhulu kunawo wonke liseKent (eNgilandi), elakhiwe yi-EON ne-DONG. Ukuvela kwamandla omoya wasolwandle nekusasa lawo.
IMadrid ibamba umbukiso wamandla avuselelekayo (GENERA)
Kusukela ngoFebhuwari 28 kuya kuMashi 3, i-IFEMA isingatha umbukiso we-GENERA ngamandla avuselelekayo. Ungathola iziphakamiso zezinkampani ezingama-76.
"Isikhathi sesibaseli sesiphelile, sisesikhathini samandla avuselelekayo"
Ukuvela kweForamu Yesolar III, ikusasa lamandla avuselelekayo. Ukuvela kukaKhomishani waseYurophu Wezenzo Zesimo Sezulu Namandla Amandla Miguel Arias Cañete.
Kunezinto eziningi ezintsha ezisunguliwe ngenxa yesenzo samandla avuselelekayo nentshisekelo yokuzithuthukisela ikusasa.
Ukuvela kwamandla omoya eSpain. Kutholakala e-Andévalo (Huelva), sithola ipulazi lomoya elikhulu kunawo wonke eSpain (292 MW), eliphethwe u-Iberdrola Renovables
ISpain ikhiqize amandla amaningi omoya kulo Msombuluko kunanoma yiliphi elinye izwe laseYurophu, kuchaze ipulatifomu iDailyWind, ukukhiqizwa kwamandla omoya eYurophu.
Ikhilomitha elilodwa umgwaqo welanga eNormandy
Iphrojekthi yeWattway, umgwaqo wokuqala welanga owakhiwa eFrance, nobuhle nobubi bawo ngemuva kokubiza u- $ 5 million. Izindlela ezintsha zokukhiqiza amandla
ICosta Rica ikhiqiza cishe amandla ayi-100% avuselelekayo ngonyaka wesibili olandelanayo.
Sihlaziya isimo samanje sokukhiqizwa kwamandla avuselelekayo eCosta Rica, ukuthi imithombo yamandla isukaphi futhi izoba yini ikusasa layo
Amapaneli elanga antantayo, isixazululo sokushoda kwesikhala
IJapan neSouth Korea bahola ukusetshenziswa kwamachibi okufakwa kwamaphaneli we-photovoltaic ukuphakela izinkulungwane zezakhamizi
Imboni yelanga emhlabeni
Sihlaziya isimo esikhona njengamanje embonini yelanga emhlabeni, okuyizimbangi zayo eziphambili, kanye nokuvela kwayo eminyakeni ezayo
Amandla omoya emhlabeni
Sihlaziya isimo samanje samandla omoya emhlabeni, okuyizimbangi zawo eziphambili, kanye nokuvela kwawo eminyakeni yamuva.
IFujisawa yidolobha lokuqala elizinzile nelinokwanela eJapan
Leli dolobha elizenele liseFujisawa. Yindawo enkulu enamakhaya angaba yinkulungwane azondlayo.
ICuba yakha amapaki elanga angama-59 ukukhiqiza amandla ahlanzekile
ICuba yakha amapaki elanga angama-59 futhi ifuna ukujoyina inhloso yokufinyelela ku-24% wokuphehlwa kukagesi kumandla ahlanzekile ngo-2030.
Amandla avuselelwa womoya opholile: Amandla we-Aerothermal
Konke okuphathelene ne-aerothermy. Ayini amandla we-aerothermal, esebenza kanjani, asetshenziswa kuphi, izinzuzo asinikeza zona nokusebenza kwazo.
I-Iceland imboza umthombo ojulile wokushisa komhlaba osenhliziyweni yentaba-mlilo
I-Iceland imboza lo mthombo oshisa phansi osentabeni-mlilo ojule ngamakhilomitha ama-5 yingakho nje ujulile emhlabeni.
Ama-boiler we-Biomass nokuphikisana kwebhalansi ye-CO2
Kulokhu okuthunyelwe sizokhuluma ngama-boilers ahlukahlukene e-biomass kanye nokuphikisana kwebhalansi ye-CO2 ekhona ngamandla e-biomass.
Konke odinga ukukwazi mayelana namandla we-bioenergy noma we-biomass
Amandla avela ku-biomass noma i-bioenergy awaziwa kakhulu futhi asetshenziswa kunezinye izinhlobo zamandla avuselelekayo. Kulokhu okuthunyelwe sizokwazi konke ngaye.
Konke odinga ukukwazi ngamandla we-geothermal
Konke okuhlobene namandla we-geothermal. Ngokusuka kulokho eliyikho, ukuthi lisebenza kanjani kanye nobuhle kanye nokungahambi kahle kwalo emhlabeni kwamandla avuselelekayo.
I-China iqhubeke nokwephula wonke amarekhodi wamandla avuselelekayo ngo-2016
I-China yenza ibhizinisi futhi ifuna indlela esheshayo yokuguquka isuke kumalahle iye kumandla ahlanzekile, kufaka phakathi ukwephula amarekhodi omhlaba
Kungenzeka yini ukuthi isiqhingi sinikezwe amandla avuselelekayo kuphela?
E-Canary Islands sithola i-El Hierro, isiqhingi esikwazi ukuziphakela cishe noma ngokuphelele ngamandla avuselelekayo.
I-China Igunyaza Uhlelo Lwemandla Avuselelekayo E-Dollar
I-China imemezela uhlelo lwezigidi zamadola ukukhuthaza ucwaningo lwamandla avuselelekayo nentuthuko ezweni lonke.
Ungenza amanzi aphuze ngamandla elanga
Sekuyiminyaka, kwenziwa umsebenzi wokuthuthukisa izindlela zokwenza amanzi aphuze. Ngabe amanzi angenziwa aphuzwe ngamandla elanga?
ICosta Rica isebenze ngamandla avuselelekayo izinsuku ezingama-250 ngo-2016
ICosta Rica ingaziqhayisa ngokuthi izinsuku ezingama-250 ngo-2016 ihlehlisele ukusetshenziswa kwayo kagesi emithonjeni evuselelekayo. Impumelelo impela.
Ivumela isiphakamiso sokukhuthaza amandla avuselelekayo eSpain
I-Plenary of the Congress of Deputies izolo iphasise isiphakamiso sokukhuthaza ukuguqulwa kwamandla eSpain okuhloswe ngawo amandla avuselelekayo.
I-European Commission ihlose ukuguqula isimo samandla
I-European Commission yethule isiphakamiso sokuthi sikwazi ukushintsha umthetho ophathelene namandla avuselelekayo nokuzisebenzisa.
INorth Pole ingaphezulu ngama-20ºC kunezinga layo lokushisa elijwayelekile kulezi zinsuku
Ukuguquka kwesimo sezulu kwenza lo nyaka futhi ugcine, ngalesi sikhathi, amazinga okushisa akhuphuka kakhulu kunalokho okufanele abe yikho
Izinsalela zezitshalo zikaphayinaphu njengengxenye kawoyela
Enye yezindlela uwoyela ezitholwe ngosomabhizinisi kungaba isitshalo sikaphayinaphu. Ingabe uphayinaphu ungawuthathela indawo uwoyela?
Ngenisa izinkuni ezizinzile ukuhlangabezana nezinjongo ezivuselelekayo e-EU
I-European Union. setha imigomo yokukhiqizwa kwamandla avuselelekayo avela ku-biomass ngonyaka ka-2030 futhi izinkuni kufanele zingeniswe ukufeza lokhu.
IGesi yemvelo iFenosa ihlela ukutshala imali kumandla omoya eCanary Islands
Imayelana nokutshala imali ama-euro ayizigidi eziyi-100 phakathi kweGran Canaria neFuerteventura ukwakha amapulazi omoya ayi-13 esewonke.
Umhlaba onikezwe amandla avuselelekayo, kungenzeka?
Umhlaba osebenzisa amandla avuselelekayo kuphela ungalunga ukulwa nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu nokwenza ngcono izimo emhlabeni.
Amandla ashisayo elanga akhiqiza cishe u-4% wawo wonke amandla afunekayo ehlobo
Amandla elanga ashisayo akwazile ukumboza cishe u-4% wazo zonke izidingo zikagesi eSpain ehlobo, ngokusho kwedatha evela kuProtermosolar.
Ama-Renewables asevele edlula amalahle njengomthombo wamandla emhlabeni
Amandla avuselelekayo abamba ngaphezu kwengxenye yeminikelo yamandla yaminyaka yonke, edlula izidingo nokusetshenziswa kwamalahle.
Enye yezindlu ezisebenza kahle kakhulu emhlabeni yakhiwe e-Ibiza
Enye yezindlu ezisebenza kahle kakhulu emhlabeni yethulwe e-Ibiza engqungqutheleni yokusebenzisa amandla kagesi eyenziwe yiTerravita.
Imithombo engaba khona yamandla avuselelekayo engaphansi komhlaba emadolobheni
Ungasebenzisa imisinga yomoya emhubheni ongaphansi komhlaba kanye nezinyathelo zabahamba ngezinyawo ukukhiqiza amandla omoya.
I-winery yokuqala emhlabeni iyaziphakela ngokuvuselelwa eRioja
Isebenzisa amandla omoya akhiqizwa isigayo somoya. Ugesi owukhiqizayo uphindwe kabili obudingeka ukuze usebenze.
Sisebenzise izinhlekelele zesimo sezulu, i-turbine yomoya yeziphepho
Amandla amakhulu ahlinzekwa yilezi zivunguvungu zasendaweni eshisayo angasetshenziswa ukuhlinzeka amandla ngenxa yomoya ophehla umoya okhethekile owasungulwa.
Ukufakwa kwelanga okukhulu epulazini lezimbuzi eCanary Islands
Ipulazi eliseBetancuria (Fuerteventura) belisebenzisa amandla kuphela elikhiqizwe yisitshalo esisebenza ngamandla elanga amasonto ambalwa.
Ukuvuselelwa kuya kuba ngcono futhi kungcono, kepha kufanele bakwenze ngokushesha okukhulu
I-World Energy Resources 2016, eyethulwe izolo e-Istanbul, iveza ukuthi ukukhula okuphezulu kwemakethe yamandla avuselelekayo eminyakeni eyi-15 edlule.
Umkhakha ovuselelekayo uthinteka kakhulu ngezimali eziphansi kepha amanye amaphrojekthi akuthola ngenxa yemisha yabo.
Kuliqiniso elenziwa yipulazi lase-Australia. Ubuchwepheshe bokukwenza buthuthukiswa yinkampani yaseDenmark i-Aalborg CSP.
Amaseli amasha elanga athuthukisa ukusebenza kahle kwamandla ezakhiwo
Ochwepheshe baseYurophu benze amaseli amasha we-organic photovoltaic athuthukisa ukusebenza kwamandla ezakhiweni.
I-Extremadura ngumphakathi ozimele ohlanganisa amandla amaningi ngokuvuselelwa
I-Extremadura isibe yi-Autonomous Community yaseSpain ehlanganisa amandla kagesi kakhulu ngenxa yamandla elanga.
Abesifazane bakha izitofu zemvelo eNicaragua
Inhloso yalokhu ukunciphisa imiphumela engcolisayo ekhiqizwa ngophethiloli futhi ngayo, sinciphise nezindleko ezindlini zabo.
Izinkampani zokwakha zizinikele kwezemvelo
Phakathi kwezinkampani ezinikele ekwakhiweni eSpain, sithola ezinye zazo zizinikele kakhulu emvelweni.
Izinhlobo ezine zezinkawu ezinkulu manje zisengozini yokuqothulwa
I-gorilla esempumalanga okwamanje ibhalwe ohlwini olubomvu lwezinhlobo ezine kwezingu-XNUMX ezinkulu kakhulu zezinkawu emhlabeni.
Ukusimama nokuguqulwa kwamandla eJalimane
Ukuguqulwa kwamandla eJalimane kusekelwe ekwakhiweni kwamandla avuselelekayo kanye nokwanda nokusebenza kahle kwemithombo ekhona yamandla.
Ukuhlangana kwe-PP nezakhamizi: Ukuqedwa kweNtela Yelanga
Isivumelwano esenziwe ngabaholi ababili sokutshalwa kwezimali kukaRajoy sicacisa ngokususwa kweNtela Yelanga elaphasiswa Esimemezelweni Sasebukhosini ngonyaka ka-2015.
Ngenxa yokuvuselelwa, i-Andalusia isindisa izigidi zama-euro
URedeja unike amandla i-Andalusian Administration ukuthi yonge ngaphezu kwama-euro ayizigidi ezingama-5,3 ngonyaka ekusetshenzisweni kwamandla.
Kwethulwa umbiko wokwakhiwa kwesitshalo se-biomass eHuesca
Inkampani yaseForestalia ihlose ukwakha isitshalo se-biomass eMonzón, esiseHuesca. Umbiko uhlaziya umthelela wekhwalithi yomoya.
IJalimane iyakwazi ukukhiqiza amandla avuselelekayo acishe afihle ngokuphelele isidingo samandla
IJalimane iyakwazi ukukhiqiza amandla avuselelekayo acishe afihle ngokuphelele isidingo samandla, i-90%. Kwakhiwe ama-gigawatt angama-55 esewonke.
Inkampani kagesi u-E.on ilahlekelwa ngama-euro ayizigidi ezingama-3.000 ngokungatshali imali kumandla avuselelekayo
Inkampani kagesi i-E.on ilahlekelwa ngama-euro ayizigidi ezingama-3.000 ngokungatshali imali kumandla avuselelekayo. Manje unendlela entsha ezoshintsha.
Ukuthatha amandla avuselelekayo ukubhekisisa eSpain ngekusasa
Ama-Renewables ayahlukunyezwa eSpain kepha nokho kufanele sisebenzise ithuba lokwakhiwa kukaHulumeni omusha ukubheka izinto ezibalulekile.
Amandla avuselelekayo (owaziwa nangokuthi ahlanzekile) yiwo wonke lawo mandla angaveli amagesi abamba ukushisa noma ...
UTesla ekugcineni uthenga iSolarCity, ukuhlangana kokuvuselelwa kuyazalwa
U-Elon Musk, umnikazi wezigidigidi weTesla, ekugcineni unquma ukuthenga inkampani yeSolarCity ngamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2.600.
Iphrojekthi yakwa-SALSA: gcwalisa kabusha izimoto zikagesi ngamandla avuselelekayo
I-Albufera Energy Storage, inkampani ezinikele emandleni nakumabhethri, idala iphrojekthi yakwa-SALSA ukukhokhisa izimoto zikagesi ngamandla avuselelekayo
U-Achim Steiner: ISpain ibizoba umholi emandleni avuselelekayo ukube bekungeyona inkinga yezomnotho
Ngokusho kuka-Achim Steiner, owayengumphathi omkhulu we-UNEP, iSpain ngabe ibingumholi emandleni avuselelekayo emhlabeni wonke ukube bekungeyona inkinga.
ISpain ihlala ithatha isinyathelo sokubuyela emuva kumandla avuselelekayo
Kuyo yonke le minyaka, ngenkathi yonke i-European Union kanye nomhlaba kuthuthukisa ubuchwepheshe obuvuselelekayo, iSpain yenze okuphambene nalokho.
ICyclalg yiphrojekthi eqhubeka nesigaba esishiywe yiphrojekthi yangaphambilini ye-Energreen, inhloso yayo ukudala i-biodiesel ngokusebenzisa i-microalgae.
U-El Hierro wephula irekhodi lakhe ekusetshenzisweni kwamandla avuselelekayo
Isiqhingi sase-El Hierro sikwazi ukuhlala amahora angama-55 elandelana sizinikeza kuphela amandla avuselelekayo. Imithombo yawo ingumoya namanzi.
IBarcelona izokwakha inhlangano yokuhweba yamandla avuselelekayo
IBarcelona izokwakha inhlangano ezothenga futhi ithengise ngayo amandla avuselelekayo akhiqizwa ezakhiweni ezizimele noma zomphakathi e2019.
Isiqhingi sokuqala eMedithera esinikezwa kuphela ngamandla avuselelekayo
I-Tilos, isiqhingi esiseLwandle iMedithera, ngesokuqala ukunikezwa kuphela ngamandla avuselelekayo ngenxa yephrojekthi ye- "Horizonte Tilos"
Isakhiwo sokuhlala eMadrid sinokufakwa okukhulu kunawo wonke komhlaba eSpain
Isakhiwo sokuhlala esakhiwe eMadrid sinokufakelwa kwamandla okuvuseleleka okukhulu kunazo zonke eSpain ukukhulisa ukusebenza kahle.
Isitshalo sokuqala se-agro-industrial biogas sitshalwa e-Andalusia
ISociedad Agroenergía Campillos SL. iqala isitshalo sokuqala se-agro-industrial biogas e-Andalusia esizokhiqiza amandla aluhlaza nomquba.
Abazalwane ababili baseKerala benza i-turbine yomoya ebiza kancane ezoguqula imakethe
Abazalwane ababili baseKerala, isifunda saseNdiya, bafuna ukwenza izinguquko emakethe ngaleli turbine ekhiqiza ugesi owanele indlu
Amandla weTidal, ikusasa lamandla avuselelekayo
Ebhekene nokuntuleka kwemithombo yemvelo kanye nezidingo zesimo sezulu esisha, amandla wama-tide amele namuhla ...
Amaseli weSolar Photovoltaic Asobala
Kusukela ngo-2011 nangokuvela kwemidiya kwe-WYSIPS, sizwa ngamaseli elanga asobala ezinsizeni eziningi, ukucwebezelisa ilanga, ...
Amandla elanga angalawula okuvuselelekayo ngo-2030
Ngokuya kwamandla ahlanzekile, amandla elanga, ukulimaza ukukhula okusheshayo kakhulu iminyaka engu-5, kuyaqhubeka ...
U-99% kagesi waseCosta Rica uvela kokuvuseleleka
ICosta Rica ifinyelele kuma-99% kagesi otholakale emandleni avuselelekayo kulo nyaka ka-2015. Impumelelo impela engezwe kuleyo ye-Urugay.
URawlemon, indawo elanga enamandla amakhulu kunamaphaneli we-photovoltaic
Ngemuva kweminyaka eminingana yentuthuko, umqokeleli welanga waseRawlemon uqala umsebenzi wakhe wokuhweba. Idalwe ngumakhi wezakhiwo waseJalimane, ibhola elibonakalayo eligcwaliswe ngamanzi elikwazi ukuguqula amandla angaphezulu angama-70% kunephaneli elanga yakudala.
I-Photovoltaics izobala i-10% yesizukulwane somhlaba ngo-2030
Izolo eMadrid i-ANPIER ibibambe i-II International Conference lapho kutholakale khona imininingwane ethakazelisa kakhulu emhlabeni ngesizukulwane se-photovoltaic sango-2030
Amandla aphindwe izikhathi ezingama-400 kunephaneli yendabuko yelanga eyenziwe yileli baluni
Lawa mabhaluni elanga angaba yisiphephelo soshintsho olukhulu maqondana namandla elanga kuyo yonke iplanethi.
ISolarCity imemezela amapaneli elanga asebenza kahle kakhulu emhlabeni
ISolarCity imemezele ezinsukwini ezi-3 ezedlule amapaneli elanga asebenza kahle kakhulu okwamanje ngamaphesenti angama-22.
Ngaku-2000, okwakuyipulazi lokuqala lomoya emhlabeni
Ngaku-2000 kwakuyipulazi lokuqala lomoya emhlabeni ngo-1981 ngenkathi lakhiwa ukunika amandla ugu lwasePacific e-United States.
Ama-Renewables akhiqiza u-32,5% wamandla eJalimane engxenyeni yokuqala yonyaka
Maphakathi nonyaka, amandla kagesi akhiqizwa okuvuselelekayo afinyelele kuma-32% eJalimane, ekhombisa intshisekelo yawo kumandla ahlanzekile.
ISweden iphinda kabili ukusebenza kwelanga iye kuma-34%
Kufika kuma-34% yisibalo esithuthukisiwe sokusebenza kahle kwelanga, okuphindwe kabili lokho kwamapaneli ejwayelekile elanga
I-Tasmania ibheka ikusasa elivuselelekayo eliwu-100%
ITasmania inamandla amakhulu okuvuselelwa okuluhlaza futhi bayakwazi lokhu futhi bafuna ukukusebenzisa ngokugcwele
Amandla elanga aqoqwa oseyili bomkhumbi
Inkampani yaseFrance isungule amaseli we-photovoltaic afakwe oseyili bomkhumbi futhi akwazi ukuhlinzeka nge-1 kW.
Izingwadule yizifunda ezihamba phambili zokufaka izitshalo zamandla elanga ezigxile
Iqembu lososayensi libona izingwadule njengezindawo ezifanelekile lapho kutholakala khona izitshalo zamandla elanga (CNP)
Indawo yokupaka enama-canopies elanga kuwumqondo omuhle
Kunezindawo eziningi zokupaka izimoto edolobheni futhi ukube lezi zimbozwe ngamanothi elanga bazoba nezinzuzo eziningi
Kufika kumathani ayizigidi ezingama-45 we-CO2 angonga ipulazi lomoya elisesimweni esisezingeni eliphezulu
Yonga amathani afinyelela ezigidini ezingama-45 we-CO2, inani elilingana ne-CO2 elimunce ihlathi le-1286 km2 eminyakeni engama-25
'I-Wind Tree', i-turbine entsha yomoya ebukeka njengesihlahla futhi yakha amandla buthule
I-Wind Tree i-turbine yomoya entsha ethule ngokuphelele enomumo wesihlahla ophelele ezindaweni zasemadolobheni
Ama-wind turbines angenamphephelo afika nephrojekthi yeVortex
Ama-vortex propellerless turbines angaba obunye bobuchwepheshe obubaluleke kakhulu bokuvuselelwa okwethulwe kulo nyaka nasesikhathini esedlule
Ingxoxo nabaphumelele emncintiswaneni we-Siemens Spain Power Matrix Challenge
NgoLwesithathu olwedlule imiklomelo ye-Siemens Power Matrix Challenge yanikezwa iphrojekthi ye-matrix esimeme kakhulu
'Izihlahla zelanga' ukuhlinzeka ugesi ne-Wi-Fi emapaki. Isiphakamiso esisha senkampani yakwa-Israeli
IPlanetSolar ihambe emhlabeni wonke ingashayeli lutho ngaphandle kwamandla elanga ayi-100%
I-E1, i-generator ye-thermoelectric esebenza ngaphandle kukaphethiloli
I-Alphabet Energy yakhele i-generator engasebenzisi uphethiloli, kepha esikhundleni sayo isebenzisa ukushisa kwemfucumfucu kusuka kumishini yezimboni
Umoya uphambi kwamandla we-fuel-based energy emazweni aseNordic
Isibonelo somhlaba wonke ukuthi amazwe aseNordic akwenzani ngokuvuselelwa
Umndeni wakwaRockefeller ususa utshalomali lwawo kusuka kumafutha ezimbiwa kuya kokuvuselelekayo
Umndeni wakwaRockefeller uzibophezele ekuhlanzeni amandla avuselelekayo ngokulahla izimpahla zawo kumandla okubasa
Umkhiqizi wamandla wamanzi olwandle ogcwele ngokugcwele ufikile
Amandla omswakama kusamele asetshenziswe kahle, ngoba kutholakala umthombo ongashi olwandle
Amaseli we-Photovoltaic kupende wokufafaza
Abaphenyi e-University of Sheffield, e-United Kingdom, benze amaseli we-photovoltaic angasetshenziswa njengopende we-aerosol.
Ingxenye yesithathu yamandla asetshenziswa yiJalimane ivela kumandla avuselelekayo
IJalimane iphinde yanqamula zonke izibikezelo ngokufinyelela kumaphesenti angama-75 wesidingo ngamandla avuselelekayo
Amandla elanga athole umfutho e-Australia
Ezindaweni eziqhelile ezifana nezwe laseQueensland, amandla elanga ayaba yinto yangempela kubahlali bawo
Amandla olwandle avela emandleni, amandla e-kinetic, thermal kanye namakhemikhali wamanzi olwandle, angasetshenziswa ukukhiqiza ugesi, amandla okushisa noma amanzi okuphuza.
Amapaneli we-photovoltaic azimele, inguquko entsha
I-athikili ethokozisayo ngamaphaneli elanga azisebenzelayo akhiqizwa iqembu lokucwaninga leStanford University
I-Ireland yokuphakela amandla omoya e-UK
I-athikili ethokozisayo lapho sethula futhi sazisa iphrojekthi esayinwe phakathi kwe-Ireland ne-United Kingdom ukuze laba bakamuva bathole amandla omoya avela kowokuqala
Singawenza kanjani amandla ethu omoya esizenzele wona?
Ividiyo ehehayo lapho sifunda khona ukuthi singawenza kanjani amandla ethu omoya ekhaya ngenqubo elula futhi ngezindleko eziphansi
Thola Umsebenzi Wenyuvesi Wamandla Avuselelekayo
I-athikili ethokozisayo ngomsebenzi okhona eBritish University ngamandla avuselelekayo
Ukwakha iWindmill (I)
I-athikili ethokozisayo ngokwakhiwa kwesisekelo somoya esenziwe ekhaya.
Ukwelashwa kwamanzi angcolile kusetshenziswa amandla elanga
I-athikili ethokozisayo mayelana nephrojekthi eyakhiwa eNyuvesi yase-Almería yokwelashwa kwamanzi angcolile.
Amandla we-geothermal asindisa ama-70% wamandla okusetshenziswa emakhaya womndeni owodwa
I-athikili ethokozisayo mayelana noshintsho olwenziwe ekhaya elilodwa lomndeni elizuze ukonga amandla okungama-70% ngenxa yamandla we-geothermal.
Ngabe idolobha linikezwa ngokuphelele amandla avuselelekayo?
I-athikili ethokozisayo lapho siphakamisa futhi siphendule ngokwengxenye lo mbuzo Ingabe idolobha linikezwe amandla avuselelekayo ngokugcwele?
I-athikili ethokozisayo ngokusungulwa okusha kuka-Eole Water, ophendulwa umoya wawo uzoguqula amanzi afinyeziwe emkhathini abe ngamanzi okuphuza.
Amandla avuselelekayo asebenzela ukunciphisa ukungcoliswa emazweni ahlukahlukene, ngoba kungenye yezinjongo ezinhle lapho kubhekwa amanye amaphrojekthi wamandla amasha afana
Amandla avuselelekayo ahamba ngejubane elihle kakhulu eVenezuela, elinye lamazwe aseNingizimu Melika afuna ukuthola amandla emithonjeni yemvelo ukuze alungele ikusasa
Iphrojekthi yamandla elanga ezikoleni zasemakhaya
Kancane kancane kuthuthukiswa amaphrojekthi wamandla elanga athuthukiswayo ezikoleni ezisemakhaya. Olunye lwale misebenzi seluphelile eVélez, lapho kunezikole ezithile ezisemakhaya
Amandla avuselelekayo epulazini lomoya laseGuajira
Isifunda saseLa Guajira sinenhlanhla yokuba nepulazi lomoya elisebenzayo futhi ngokungangabazeki ...
I-Nanotechnology yamandla elanga
Intuthuko entsha emkhakheni we-nanotechnology ihlobene nomkhakha wamandla elanga, ikakhulukazi ...
Ukukhula kwamandla avuselelekayo ePoland
Ngo-2011, ukusetshenziswa kwamandla avela emithonjeni evuselelekayo ePoland kwakungu-8,8%, okuyi-56% yawo kwakungamandla akhiqizwa yi-biomass.
Amandla we-geothermal ngenxa yezintaba-mlilo
E-United States kuhloselwe ukusebenzisa intaba-mlilo engasebenzi kahle, ikakhulukazi kuhloselwe ukusebenzisa amadwala e ...
Izinhlelo ze-Biogas ezisuselwa endle yengulube e-Argentina
ECórdoba, e-Argentina, indle yengulube isetshenziselwa ukukhiqiza amandla
Amandla avuselelekayo akhuphuka ngokuya ngesidingo somhlaba
Kancane kancane amazwe amaningi andisa imithombo yawo yamandla evuselelekayo futhi ahlanganisa amaphesenti aphezulu we ...
IDominican Republic inyusa amandla ayo kumandla avuselelekayo
Ezinyangeni ezedlule, mkhulu umsebenzi osuwenziwe eDominican Republic ukwenza ngcono amandla wokukhiqiza amandla avuselelekayo futhi ...
Amandla okushisa elanga asiza ukunciphisa ukungcoliswa
Yize ngokuvamile yonke imithombo yamandla evuselelekayo inentshisekelo ukunciphisa ukungcoliswa, enye yalezo ezisiza ...
INingizimu Afrika kanye namandla ayo emandleni elanga
INingizimu Afrika ingaba ngumkhiqizi omkhulu wamandla elanga ngokuzayo
Izinto zokusetshenziswa zemvelo
Kubalulekile ukusebenzisa izinto zokusetshenziswa zemvelo
Amandla avuselelekayo eCampeche
Ngaphakathi eMexico kunezindawo eziningi lapho amandla avuselelekayo enendawo ayithandayo futhi eCampeche kungu ...
I-Acciona, isikebhe esisebenzisa amandla avuselelekayo
Amandla avuselelekayo angasetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene kanti enye yalezi zindawo iku-regattas. Kuphelile…
I-Peru ithuthuka ngamandla we-biomass
Isikhathi esithile iPeru ibinentshisekelo kumandla avuselelekayo naphakathi kwazo zonke izinhlobo ze ...
Amandla avuselelekayo asiza ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu
Ukwakhiwa kwamandla avuselelekayo kunezinhloso ezahlukahlukene, kepha okunye okubaluleke kakhulu ngaphandle kokungabaza ...
I-UK kanye nemithombo yamandla evuselelekayo ngo-2030
I-UK namandla avuselelekayo
Ukukhangisa emgwaqweni ngamandla omoya
Amaphosta wokukhangisa asebenzisa amandla omoya
Iphrojekthi yomoya eSucre ilungiselelwe
Endaweni yaseSucre eVenezuela kufundwa iphrojekthi ethakazelisa kakhulu yamandla omoya, ...
Iphrojekthi yamandla omoya enamandla eKansas
Inkampani iBP ihlela ukwenza iphrojekthi ethokozisayo yamandla elanga eKansas e-United States, a ...
I-Uruguay ifisa ukuthola u-50% wamandla ayo avuselelekayo
E-Uruguay, kuthathwa izinyathelo ezibaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi amandla avuselelekayo ayaqhubeka nokukhula, kuze kufike ezingeni lokuthi ...
ICoca Cola izosebenzisa amandla elanga esitshalweni sayo eNingizimu Afrika
ICoca Cola izosebenzisa amandla elanga esitshalweni esiseNingizimu Afrika
Ubhiya ophansi onomthelela kwezemvelo
Indawo yokuphisa utshwala iMahou izothenga amandla aluhlaza
Izinqola zegalofu ezisebenza ngelanga
Izinqola zegalufu ezisebenza ngamandla elanga
Umthelela wamandla omoya ku-landscape
Ezindaweni ezahlukahlukene zaseSpain nakwezinye izingxenye zomhlaba ungabona izindawo lapho ungabona khona ...
Amandla omoya ekhaya
Kungenzeka ukusebenzisa amandla omoya ekhaya
Amazwe athenga futhi athengise ugesi
Kunamazwe athengayo amanye athengisa amandla
Amandla omoya asiza ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu
Amandla omoya ayaziswa namuhla njengoba kufanele, ngoba luhlobo lwamandla ...
Amabhethri aguquguqukayo azoba inketho eminyakeni ezayo
Izindlu eziluhlaza zibaluleke kakhulu emakethe yezindlu
Amakhaya aluhlaza angotshalo olukhulu lwezezakhiwo
I-Tecnosfera, isakhiwo esiyindilinga esihlaba umxhwele kakhulu emhlabeni
I-technosphere iyisakhiwo esinobungane e-Dubai
Amachibi asezindaweni ezishisayo agcizelela ukuguquka kwesimo sezulu
Amachibi asezindaweni ezishisayo enza ukungcola
UNestlé usebenzisa amandla elanga ukwenza u-ayisikhilimu
Ifektri kaNestle ka-ayisikhilimu yafaka uhlelo lwamandla elanga
Amapaneli welanga anemibala
Kwethulwe imodeli entsha yamaphaneli elanga anemibala
Indwangu enamapaneli elanga akhiqiza amandla
Ubuchwepheshe belanga bezindwangu bungenye yamaphrojekthi amasha sha ngokwamandla ahlanzekile
IMexico nesitshalo sayo esisha se-biomass
Isitshalo esisha sokuzibandakanya esinamandla we-biomass eMexico sithembisa ukukhiqiza amandla ahlanzekile okumisa ngokuya ngophethiloli
Ukubanda kwelanga: amaphaneli elanga akhiqiza ukupholisa kwesimo somoya
Kungenzeka ukuthola amakhaza avela kumaphaneli elanga we-photovoltaic ukusebenzisa ama-air conditioners ngendlela yemvelo: ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla namandla e-CO2.
Ukukhanya kokuqala komgwaqo ku-Argentina
Ukukhanya kokuqala komgwaqo elanga e-Argentina
Imigwaqo ingakhiqiza amandla kagesi
Unjiniyela waseNgilandi uPeter Hughes udale imigwaqo esizakala ngokunyakaza okudalwe ukudlula kwezimoto ukudala amandla nokunikezela ukukhanyisa komphakathi kuze kufike ebangeni elingu-1,5 km.
Amandla wepiezoctric aguqula ukunyakaza komuntu kube ugesi
Amandla we-piezoelectric akwazi ukukhiqiza ugesi ngokucindezela noma ukungqubuzana okwenziwa ngabantu ezintweni ezithile lapho sihamba. Izinto zokwakha zemvelo noma zokwenziwa.
Amandla okushisa elanga akhishwa inyumbazane ekukhuleni komkhakha ngenxa yokwehla komkhakha wezezakhiwo, yingakho imikhiqizo yawo ikhuthazwa kwezinye izindawo njengezibhedlela noma ukuze isetshenziswe esiqandisini.
Isikhathi sokubuyisela sokutshalwa kwemali kumandla avuselelekayo
Ngaphambi kokwenza noma yikuphi ukutshalwa kwezimali, omunye wemibuzo okufanele uyihlaziye isikhathi sokubuyisa sokutshalwa kwezimali. Okuningi…
Amahhotela ezemvelo: inketho yezokuvakasha enesibopho
Amahhotela aluhlaza kufanele ahlangabezane nezimfuneko ezithile ukuze afaneleke kanjalo. Zingenye indlela yokwenza ezokuvakasha ezinesibopho futhi ezizinzile.
Izindlu ze-Bioclimatic (1). Ukuqondiswa kwaseNingizimu
Izindlu ezisebenzisa imvelo ukukhulisa izinsiza zemvelo njengendlela yokonga amandla, imali nokwenza izakhiwo ezihlonipha imvelo.
Umthetho Wokuthuthukisa Amandla we-Hydroelectric uzoba njalo
Amandla avuselelekayo ahlinzeka ngemithombo ehlukahlukene ukukhiqiza amandla ahlanzekile
IBelgium nokwanda kwayo ekukhiqizeni amandla omoya
EBelgium, inselelo yokukhiqiza okungaphezulu kwe-
Ama-Subsea turbines akhiqiza amandla
Imishini yangaphansi kolwandle yenza kube nokwenzeka ukusebenzisa ngokunenzuzo imisinga yasolwandle ukukhiqiza amandla
Imvelaphi nomlando wamandla elanga we-photovoltaic
Amandla elanga ngumthombo wesimanje wokusetshenziswa kwamandla
Inguquko yesithathu yezimboni isuselwa kumandla avuselelekayo
Izimila zasolwandle zakha upulasitiki
I-Algaeventure Systems (AVS), ingenye yeziningi
Izinkampani Zamandla Avuselelekayo aseSpain, ingxenye II
Kuvela engxenyeni I ENERCO RENOVABLES
Ibhayisikili kagesi labadala
Inkampani iPanasonic ithengisa amabhayisikili kagesi asebekhulile
Ama-biodigesters emaphandleni ase-Argentina
Ama-biodigesters asetshenziswa kakhulu emikhakheni yase-Argentina
Amandla kagesi eYurophu
IYurophu yisifunda somhlaba esinamandla amakhulu
Amandla elanga ukufaka ophahleni noma phansi?
Amandla elanga nokufakwa kwawo okuhlukile ophahleni noma phansi
I-CO2 nempilo yomphakathi
I-CO2 ayiguquli isimo sezulu kuphela kodwa futhi ilimaza nempilo yabantu
Amandla omoya, ophephela womoya I
I-turbine yomoya uhlobo lwenjini yomoya ekwaziyo
Ngabe kukhona amandla anele emhlabeni kuwo wonke umuntu?
Kukhona amandla anele kuwo wonke umuntu uma kusetshenziswa imithombo evuselelekayo
Ukuxhashazwa okufanele kwemithombo evuselelekayo
Ukuxhashazwa kwemithombo yamandla evuselelekayo kungaba nemiphumela emibi emvelweni